म्यासेज र अडियो काण्ड: 'बलात्कार महिलाको योजना मुताविक' | Citizen Post News
विराटनगर । धर्मगुरु कृष्णदास गिरी उर्फ 'सिद्धबाबा' लाई बलात्कार गरेको आरोप लगाउने महिलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनलाई बलात्कार गर्न उक्साउने खालको दर्जनौं म्यासेस पठाएको तथ्य सार्वजनिक भएकोे छ । सोही म्यासेसबाट उत्साहित भएका कृष्णदासले उनको आश्रम पुगेकी ती महिलामाथि शारिरीक सम्वन्ध बनाएको र त्यो सम्वन्ध बनाएर आफूले गल्ती गरेको भन्दै उनले माफी मागेको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
दुवैको 'म्यासेज र अडियो काण्ड' ले नयाँ मोड ल्याएको छ । बलात्कृत भएकी भनिएकी ती महिलाले पठाएका विभिन्न म्यासेज र कृष्णदासले गल्ती स्वीकार गरेको अडियोलाई केलाउने हो भने कृष्णदासले गल्ती गरेकै प्रमाणित हुन्छ । तर गल्ती गर्नका लागि उक्साउने काम अर्थात 'रोडम्याप' भने पीडितले नै तयार पारेको 'ट्रयाप' अन्तर्गत भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक भएको अडियोमा कृष्णदासले गल्ती गरेको स्वीकार मात्र गरेको छैनन्, त्यस्तो गल्ती कुनै पनि महिलामाथि नगर्ने भन्दै एक पटकलाई माफ गर्न भनेका छन् । ती महिलाले कृष्णदासलाई गत कार्तिक ४ गते आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । ती महिलाले कृष्णदासलाई बलात्कारको आरोप लगाएपछि उनका अनुयायीहरुले उनले पठाएका विभिन्न म्यासेज सार्वजनिक गरिदिएका थिए । उनले कृष्णदासलाई 'सेडेयुस' गर्न पठाएका म्यासेज मात्र करिब ५२ पेज रहेको बताइएको छ ।
म्यासेजहरुमा ती महिलाले एकान्तमा भेटेर चुम्बन र अंकमाल गर्न इच्छा प्रकट गरेकी छन् । उनले अरुलाई भेट्ने र आफूलाई चाहिँ वेवास्ता गरेको भन्दै दुःखेसोसमेत पोखेकी छन् । ४ अक्टोबर २०१९ मा पठाएको एक म्यासेजमा ४४ दिनभित्र भक्त र भगवानबीच वारपार हुने ती महिलाले चेतावनी दिएकी छन् । उनले म्यासेजमा लेखेकी छन्, ‘अरुसँग बोलाएरै भेटिन्छ, मैले यति बिन्ती गर्दा नि यति वेवास्ता, अब समय सकियो जम्मा ४४ दिन छ । कसरी पूर्ण बनाउने हो हजुरको हातमा छ ।’
यो म्यासेजले उनी कृष्णदाससँग शारिरीक सम्वन्ध बनाउन कति भोगी थिइन भन्ने देखाउँछ । ‘एकचोटि भेट्न पाए नि हुन्थ्यो, कति चुम्न मन छ । के यो झुटो होर ? हजुरको मनमा टोलाउँदा आफैं मुस्कुराउँछन् यी ओठ, के यो नाटक हो ?’ उनले यस्ता खालका अनगिन्ति म्यासेज कृष्णदासलाई पठाएकी छन् । त्यति मात्र नभई उनले उनी र आफ्नो श्रीमानबीच राम्रो सम्वन्ध नभएको समेत म्यासेजमार्फत नै खुलसा गरेकी छन् ।
उनले पठाएको म्यासेजमा भनिएको छ,‘बुढाले छुँदा पीडा हुन्छ, उहाँ (श्रीमान) पनि पराई भैसक्नुभो । म जती पराई कोही छैन । म घृणाको लायक छु, अझै घृणा गरिस्यो, यति घृणा गर्नुहोस् की मेरो छाती छियाछिया होस् ।’ उनको एकतर्फी म्यासेजमा कृष्णदासले जवाफ दिएको देखिन्न । ती महिलाले पठाएको अधिकांश म्यासेजहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने बाबासँग सम्वन्ध गाँस्न उनी आतुर थिइन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
उनका हरेक म्यासेजले कृष्णदासलाई उनीसँग सम्वन्ध गाँस्न बारम्बार उस्काएको देखिन्छ । कृष्णदासलाई भेट्न गएको बेला उनीहरुबीच अस्वभाविक सम्वन्ध बनेको तर पछि ती महिलाले उनलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएको देखिन्छ । 'सेडुयुस' गर्नसम्म गरेपछि सम्वन्ध गाँस्ने बेला चाहिँ ती महिलाले नाई गरेको म्यासेज र अडियोले त्यहि प्रमाणित गर्छ ।
त्यति मात्र होइन, कृष्णदाससँग अन्य महिलाले शारिरीक सम्वन्ध राखेको समेत उनी जानकार थिइन । त्यसैले त उनले म्यासेजमा अरुसँग चाहिँ भेट्ने मलाई चाहिँ बेवास्ता गर्ने ? भन्दै आक्रोश पोखेकी थिइन । कृष्णदासले गल्ती गरेकै हुन् तर ती महिलाकै योजना मुताविक । घटनाक्रमले त्यहि पुष्टि गर्छ । बाँकी प्रहरीको अनुसन्धानले भन्ला ।